मेघा लुब्रिकेन्टसद्वारा सात डिलरलार्इ कम्बोडिया र थाइल्याणको ७ दिने भ्रमण
काठमाडौं । मेघा लुब्रिकेन्टसले आफ्नो उत्पादन उत्कृष्ट बिक्री गर्ने डिलरहरुलार्इ हरेक बर्ष विदेश भ्रमण गराउँदै आएको छ ।
यस बर्षका उत्कृष्ट बिक्रेतालार्इ जेठ १६ गतेदेखि २३ गतेसम्म कम्बोडिया र थाइल्याण भ्रमण गराउन लागेको हो ।
मेघा लुब्रिकेन्टसले केही बर्षदेखि नेपालभर मेघा लुब्रिकेन्टसको बिक्री वितरण गर्दै आएको छ ।
आफ्ना उत्कृष्ट डिलरहरुलार्इ विभिन्न देशको लुब्रिकेन्टस उद्योग अवलोकन गराउने क्रममा अघिल्लो बर्ष इन्डोनेसियाको भ्रमण गराएको र यो क्रम हरेक बर्ष गरिने मेघा लुब्रिकेन्टस प्रा. लि. का प्रबन्ध निर्देशक तथा नाडाका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले बताए ।
यस बर्ष यो भ्रमणमा सात जना उत्कृष्ट डिलरहरुको सहभागिता रहेको छ ।